नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): यो पञ्चे बाजा र गीतले तपाईंलाई एकै छिन् नेपालमै पुर्याउने छ : नभन के गरम, धेरै भयो तिम्लाई मन पराको अब त बे गरम !
यो पञ्चे बाजा र गीतले तपाईंलाई एकै छिन् नेपालमै पुर्याउने छ : नभन के गरम, धेरै भयो तिम्लाई मन पराको अब त बे गरम !
कती दु:खद र राजनीतिक बेमाइनीका मात्र समाचार, लौ जा आज नेपाली पञ्चेबाजा सहितको अत्यन्त मिठो गीत र नाचलाई प्राथमिकता दियो नेपाल मदरले, जे पर्ला पर्ला ! परेको हामी आफै बेहोरौँला !
अरु पञ्चेबाजा सहितका केही गीत र नाच हेर्ने मन भए भित्र जानुस्